Deetaa Wardiiwwan Irraa Saaguu
Qabiyyeewwan man'ee qeenxee garagalchuuf gabaticha muraa fayyadami.Foormulaas man'ee irraa garakeessa gabaticha muraatti garagalchuu ni dandeessa ( fakkeenyaaf , sararicha naqaa kabalicha foormulaa irraa) sana booda foormulichi garakeessa barruutti saagamuu ni danda'a.
Hammanga man'ee garakeessa galmee barruutti garagachuuf,hammangaa man'ee wardii keessaa filiitii achii man'eewwaan garakeessa galmicha barruutti saaguuf gabaticha muraa yookiin harkisii ka'I fayyadami.Achii wanta OLE kan irra caalaa gulaaluu dandeessu galmicha barruu keessatti argatta.
Yoo man'eewwan gara galmee dhiyeessaa mul'annoo baratamootti harkiste, man'eewwan akka wanta OLE tti achi saagamu. Yoo man'eewwan garakeessa mul'annoo tooriitti harkifaman, tokko tokkoon man'ee sarara mul'annoo toorii uuma. Yoo man'eewwan salphaamatti harkifte man'eewwan sochoofta. Man'eewwan kan garagalchaman yommuu harkiftu yoo furtuu Shift dhiibde qofa.
Yommuu hammanga man'ee LibreOffice Calc irraa gara gabaticha muraatti garagalchitu,wantootni fakkasaa, wantootni OLE fi taattoowwan hammangaa kana keessaas ni garagalchamu. Isaan yommuu gochaa harkistee - kaa'uu jalqabdus ni garagalchamu.
Yoo hammangaa man'ee taattoo cufamaatiin saagde, taattoochi geessituu isaa gara hammangaa man'ee maddaa kan kaa'u, yoo taattoocha fi hammangaa man'ee maddaa walfaana garagalchite qofa.
Title is: Deetaa Wardiiwwan Irraa Saaguu